आफूले भेटेको मान्छेलाई संक्रमण भयो भने के गर्ने ? « Kakharaa
७ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन उच्च गतिमा बढिरहेको छ । शुक्रबार मात्र ८३८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांक अनुसार संक्रमितको आधारमा नेपाल विश्वको ६६ औं स्थानमा छ । मृत्युको हिसाबले हेर्दा भने नेपाल विश्वमा ९७ औं स्थानमा छ ।
जापान लगायतका मुलुकमा प्रयोग गरिएको ३ सीको सिद्धान्तलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव सुवेदीको छ । अनिवार्य मास्क लगाउनेबाहेक क्राउड अर्थात् भिडमा नजाने, कन्फाइन स्पेस अर्थात् बन्द (अक्सिजन सजिलै आदानप्रदान नहुने) कोठामा २–३ जना मान्छे सामाजिक दुरी कायम गरेरै पनि नबस्ने र तेस्रो सी अर्थात् क्लोज कन्ट्याक्ट ।
क्लोज कन्ट्याक्ट अर्थात् सँगै बसेर चिया खाजा खाँदा एकछिनको लागि मास्क खोल्ने गरिन्छ । यस्तो बेलामा पनि हामीले हाँसो मजाक गर्दा वा ठूलो स्वरले बोल्दा पनि कोरोना सर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले केही गरी बाहिर निस्कनै पर्ने भयो भने यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव डा। सुवेदीको छ ।
तर यसमा पनि भेटको प्रकृति अनुसार जोखिम पनि बढी र कम हुने गर्छ । सुवेदीका अनुसार अमेरिका, कोरिया जस्ता मुलुकमा गरिएको अध्ययनले देखाएअनुसार संक्रमित मान्छेसँग १५ मिनेटसम्म ६ फिटको दुरी कायम नगरी बसेको खण्डमा अर्कोमा संक्रमण सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसमा पनि दुवै पक्षले मास्क लगाएका छन् भने संक्रमण सर्ने डर हुँदैन । तर हात मिलाउने एक अर्कामा अंकमाल गर्ने जस्ता कार्य गरियो भने मात्रै यसको जोखिम बढी हुने उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, दुई जना मान्छेमध्ये एक जनाले मास्क लगाएको अवस्थामा अर्कोले नलगाउँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्नमा डा। सुवेदी भन्छन् ‘दुई जनामध्ये एक जनाले मास्क लगाउने र अर्कोले नलगाउँदा यदि नलगाउने मान्छेमा कोरोना संक्रमण रहेछ भने मास्क लगाउने मान्छेको पनि आँखाको माध्यमबाट समेत सर्ने सम्भावना हुन्छ । आँखाबाट कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना कम भए पनि अर्कोले मास्क नलगाउँदा कोरोनाको जोखिम भने कायमै रहन्छ ।’
सामानबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन ?
सामानमा पनि कोरोना संक्रमितको छिटा परेको छ र त्यो सामान छोएर मुखमा हात लगियो भने सामानबाट पनि सर्ने सम्भावना त हुन्छ । तर त्यो सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले तरकारी वा कुनै सामान बाहिरबाट आएपछि राम्रोसँग पखाल्ने वा स्यानिटाइज गरेर मात्रै प्रयोग गर्न डा। सुवेदी सुझाव दिन्छन् ।